Ogadentoday Press » Cashirka Sannadka: Halista ay ku leeyihiin, Hunguriga, Xinka Iyo Qabyaaladdu Jiritaanka ummada!
OTP- Seddex arrimood oo Soomaalida gaar u ah dhaqan ahaan la ogaaday ayaa Jiritaankooda halis ku ah. Seddexdan shay ayaa ah, Hunguriga, Xinka, Iyo Qabyaaladda. Aqoonyahanka Soomaaliga ah Iyo Siyaasigu haddii seddexdaas ay gasho wuxuu suurtagalinayaa in jiritaanka ummadu halis yahay. Haddaba su,aasha waxaa weeye sidee arrimahan looga kori karaa. Jawaabta waxaan uga tagayaa shacabka! Haddii Hogaanku caddaalad darro, Dhib sameeyo maxaa u dawo ah!
Caqligu innu u shaqeeyo ayaa la rabbaa. Melez Zenawi waxaan kulla dagaalanay in Xasuuqa Soomaalidu uusan ahayn Bilaash, dagaalkaas ha noqdo mid lagu deg-degay ama xiligii la qaaday! Dagaalkaas 30 sanno u danbaysah Dalkeena ku habsaday, Innagii la iskugu kaana dhiibay Xabad, waxaan maanta ogyahay inaan dib ugu laabanay 1991 Siyaasadii ahayd midaas oo halis kalle soo xanbaarsan.
Maanta kuwa Cabdi eedaynaya waxay ku eedaynayaan innuu dadkii Soomaali xasuuqay waxaana xaqiiq ahaan ii muuqattaa in iyagu haddii awood heli lahayeen xasuuqi lahaayeen arrintan waxaa kuu caddeynayaa qoddobo dhowr ah. Hanjabaada Social media ku qoraan, Xasuuq Oromo ay waddo oo dafirayaan, Iyagoo Xasuuq Soomaalida lagu hayo ku eedaynayaa Soomaalida isla markaasna farta ku fiiqayaa waxaan Tigree ka danbeeyay? Haddii Tigree ka danbeeyo Oromo may Tigreega aado maxay Soomaalidu ku weeraraysaa?
Aqoonyahanka, Siyaasiyiinta, Sallaadiintaa, waa lagama maarmaan inaan miis iskugu nimaadno dantana ka tashano. Dowlada Federaalka ah ee Itoobiya xaqiiq ahaan waxay na tusaysaa inaan Dadkan Soomaalida ah guud ahaan yihiin Second class- Muwaadiniinta labbaad ee Dalka. Inta baddan waxaan ku cel-celiyaa in Dadkan aan la rabbin laakiin dhulkan la rabbo in la qaato.
Qorshaha Fogna uu yahay in ummadan halis jiritaan la galiyo. Siyaasiga ama qofka caadiga ah ee dan gaar ah ummada u haligaya isla markaasna sababta u weyn tahay uuun ay tahay qoddobada aan ciwaanka ku xussay maxaa qorshe noo ah!